काठमाण्डौ । तपाईलाई कडा ज्वरो आइरहेको छ ? रुघाखोकीले लगातार सताइरहेको छ ? घाँटीको दुखाई पनि निरन्तर छ ? यी सबै स्वास्थ्य समस्यासँग जुँधिरहँदा आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको आशंका पो गरिरहनु भएको छ कि ? यदि त्यसो हो भने तपाईले सामान्य अवस्थामा आफूलाई कोरोना भए या नभएको कुरा अनलाइनबाटै थाहा पाउनु हुनेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले डिजिटल...
अब अन्तर्राष्ट्रिय उडानमाथिको प्रतिबन्ध बैशाख ३ सम्म
काठमाण्डौ । सरकारले चैत ९ गतेदेखि १८ गतेसम्मका लागि लगाएको नेपाल आउने अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा लगाएको प्रतिबन्ध आउँदो बैशाख ३ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिको आइतबार दिउँसो सकिएको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै...
कृष्णराज लामिछाने भन्छन्–‘राष्ट्रबैंकले राहातको विषयमा सोच्ने बेलै भएको छैन’
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले कोरोना संक्रमणको प्रभावबाट समस्यामा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका ऋणिहरुको राहातका लागि कस्तो प्याकेज ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आइतबारदेखि आन्तरिक छलफल थालेको छ । कामु गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले यस्तो छलफल थालेका हुन् । केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरु छिमेकी भारतको केन्द्रीय बैंकले राहात...
लकडाउन एक साता थप्ने उच्चस्तरीय समितिको निर्णय
काठमाण्डौ । सरकारले जारी लकडाउन एक साता थप्ने भएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको बैठकले लकडाउन ७ दिन बढाउनुपर्ने निश्कर्ष निकाल्दै सोही निर्णय मन्त्रीपरिषदमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिमा जारी लकडाउनलाई बढाएर चैत २५ गतेसम्म पुर्याउने विषयमा सर्वसम्मति कायम भएको हो । आज...
काठमाण्डौ । कोरोनाभाइरसले यतिबेला विश्वभरका मानिसमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ । यसबाट दिनहुँ सयौं मानिसहरुले ज्यान गुुमाइरहेका कारण मानिसहरु यसबाट बच्ने अनेकौ भ्रमपूर्ण उपायहरु खोजिरहेका छन् । विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा कोरोनाले बचाउने भन्दै अनेक भ्रमपूर्ण समाचारहरु प्रकाशित भइरहेका छन् । कोरोनाभाइरस बारे केही यस्ता...
लकडाउनको मौकामा ह्याकर सक्रिय, बच्न के कुरामा ध्यान दिने ?
काठमाण्डौ । यतिबेला कोरोनाभाइरसले गर्दा अफिसमा बसेर काम गर्नुुपर्ने बाध्यताबाट केही समयका लागि भए पनि कर्मचारीहरुले छुुटकारा पाएका छन् । कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण विभिन्न देशहरुले लकडाउन गरिरहेका कारण कर्मचारीहरु घरै बसेर कार्यालयको काम गरिरहेका छन् । बदलिदो परिस्थितीसँगै सुुरुवात भएको वर्क फ्रम होमका कारण साइबर हमलाको...
कतारमा कोरोना संक्रमित मृत्युको पहिलो घटना, ८ लाख नेपाली जोखिममा
काठमाण्डौ । करिब ८ लाखको संख्यामा नेपाली कामदार रहेका कतारमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण एकजनाको मृत्यु भएको छ । यो कोरोनाबाट संक्रमितबाट मृत्यु हुने कतारकै पहिलो केस हो । त्यहाँका जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको पुष्टि गरेको स्थानीय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । कतारमा पछिल्लो २४ घण्टामा २८ नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् ।...
राहात प्याकेज ल्याउने तयारीमा राष्ट्रबैंकः के चाहिन्छ, के आउला ?
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र लामो समयको लकडाउनमा ल्याउनुपर्ने राहात लगायतका विषयमा छलफल गर्न आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । बालुवाटारस्थित नेपाल राष्ट्रबैंकमै विभिन्न विभागका प्रमुखहरुसहितको बैठक आज(आइतबार)का लागि बोलाइएको हो । राष्ट्रबैंकका कामु गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले...
इटली र स्पेनसँग सीमा जोडिएको फ्रान्समा पनि कोरोनाको विध्वंश
काठमाण्डौ । पछिल्लो १८ घण्टामा इटलीमा मृत्यु हुने कोरोना संक्रमितको संख्या ८८९ थपिएसँगै यो भाइरसबाट सो देशमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १० हजार माथि पुगेको छ । मार्च २८ को १८ घण्टाको अवधिमा इटलीमा ८८९ संक्रमितले ज्यान गुमाएका हुन् । योसँगै त्यहाँ ज्यान गुमाउनेको संख्या १० हजार २३ पुगेको छ । ज्यान गुमाउनेको संख्यासँगै इटलीमा...
अति विपन्नका लागि राहात प्याकेज घोषणा गर्ने सरकारको तयारी
काठमाण्डौ । सरकारले देशभर दैनिक ज्याला मजदूरी गर्ने र अति विपन्न परिवारका लागि विशेष राहात प्याकेज घोषणा गर्ने भएको छ । आइतबार बस्ने मन्त्रीपरिषद बैठकबाट यस्तो राहात प्याकेज घोषणाको निर्णय हुन लागेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल निकट स्रोतले जानकारी दिएको हो...
आइएमएफले भन्यो–‘विश्व अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ’
काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसले विश्वको अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्फ धकेलिदिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष(आइएमएफ)का प्रमुख क्रिस्टेलिना जर्जिवाले शुक्रबार वासिङ्टनस्थित लेण्डर्स स्टेयरिङ कमिटीसँगको बैठकपछि यो कुरा बताएकी हुन् । आइएमएफ चिफले भनेकी छिन्–‘विश्वको अर्थव्यवस्था मन्दीको चपेटामा परेको कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । र,...
एउटा कोरोना कलसेन्टर थप, चिकित्सकीय सेवासहित २४ सै घण्टा खोल्ने तयारी
काठमाण्डौ । कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणमा जुटेको सरकारले सर्वसाधारणहरुको समस्या टिप्न तथा गुनासो सुन्न अर्को कलसेन्टर समेत थपेको छ । यसअघि सर्वसाधारणले १११५ मा कल गरेर कोरोनासँग सम्बन्धित सूचना, गुनासा तथा समस्या सरकारलाई भन्न सक्थे । एउटा मात्र कल सेन्टर हुँदा अत्यधिक कल आएपछि त्यसको सहज व्यवस्थापनका लागि अब ११३३ नम्बरको...
चौथो कोरोना संक्रमित भिस्तारा एयरबाट काठमाण्डौ आएका पुष्टि
काठमाण्डौ । नेपालका चौथो कोरोना संक्रमित धनगढीका ३२ वर्षीय युवा दिल्लीबाट काठमाण्डौ आएको जहाजको विवरण खुलेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले यो विषयमा जानकारी दिएका हुन् । डा. देवकोटाका अनुसार कैलाली स्थायी घरका भएका ती युवक दुबईबाट दिल्ली आएका थिए । दिल्लीबाट २० मार्चमा भिस्तारा एयरबाट काठमाण्डौ अवतरण...
फ्रान्सबाट आएकीसँगैको सिटमा यात्रा गर्ने अर्की युवतीलाई पनि कोरोना संक्रमण
काठमाण्डौ । चैत ४ गते फ्रान्सबाट कतार हुँदै नेपाल आएकी १९ वर्षीय युवती सवार जहाजकै अर्की यात्रु २२ वर्षीया युवतीमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनी बेल्जियमबाट कतार हुँदै काठमाण्डौ आएकी थिइन् । योसँगै नेपालमा कोभिड १९ बाट संक्रमित हुनेहरुको संख्या ५ पुगेको छ । तीमध्ये एक उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् भने २ को टेकूस्थित...
कोरानाविरुद्धको खोप निर्माण गर्दै भारतीय वैज्ञानिक, मुसामा परीक्षण गर्ने तयारी
काठमाण्डौ । विश्वमा आतंक मच्चाइरहेको कोरोना भाइरसविरुद्धको अभियानमा जुटेका भारतीय वैज्ञानिकहरुले खोप बनाउन थालेका छन्। मिडिया रिपोर्टका अनुसार भारतको नेशनल इन्स्टिच्यूट अफ इम्यूनोलोजी(एनआईआई)ले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप निर्माणका लागि देशका टप १० वैज्ञानिकको टिमले काम गरिरहेको छ। जीवनरक्षक कैयन खोप निर्माण गरिसकेको...